Kulan balaadhan oo lagu qiimaynayay waxqabadkii 6 bilood ee kuliyadaha kala duwan ee deegaanka oo ka dhacay madasha shirarka ee kuliyada caafimaadka Jigjiga. - Cakaara News
Kulan balaadhan oo lagu qiimaynayay waxqabadkii 6 bilood ee kuliyadaha kala duwan ee deegaanka oo ka dhacay madasha shirarka ee kuliyada caafimaadka Jigjiga.
jigjiga(CN) Arbaco Feb18-2015.Kulankan oo uu soo diyaariyay xafiiska tababarada xirfadaha iyo farsamada DDSI oo ay ka soo qayb galeen wasiirka xafiiska tababarada xirfadaha iyo farsamada DDS naasir xasan ahmed, wasiirku xigeenka xafiiska tababarada xirfadaha iyo farsamada DDSI mudane abuukar maxamed khaliif iyo dhamaan masuuliyiinta kuliyadaha DDSI.
Haddaba kulankaasi qiimaynta ah ayaa waxaa diirada lagu saarayay warbixintada waxqabadkii waxtarka lahaa ee 6dii bilood ee ugu danbeeyay gaar ahaan wixii laga qabtay qorshayaashii u yaalay kuliyadaha deegaanka sidii ay u meel mariyeen iyo sidii xoojin lahaa dhinacyada tababarada xirfadaha iyo farsamooyinka islamarkaana loo soo saarilahaa xirfadlayaal tayo sara leh oo cilmiyaysan u leh xirfadaha ay tababarayaan gaar ahaan dhinacyada sayniska iyo technology.
Waxaana kulankaasi qiimaynta ah ugu horayntii ka hadlay wasiirka tababarada xirfadaha iyo farsamada DDSI mudane naasir xasan ahmed oo ka warbixiyay ujeedooyinka kulankan qiimaynta ah wuxuuna sheegay in mudada uu socdo siwayn loogu lafa guridoona waxqabadkii qorshayaashii qorshaysnaa 6 bileed ee ugu danbeeyay wixii laga qabtay waxaanka qabsoomin iyo waliba sobobta ayna u qabsoomin iyo sii karaar galinta qorshayaasha soo socda.
Dhankiisa wasiir ku xigeenka xafiiska tababarada xirfadaha iyo farsamada DDSI mudane abukar maxamed khaliif ayaa ka warbixiyay doorka ay kuliyadaha DDSI ku leeyihiin taabo galinta isbadalka horumarka kor u kaca koboca dhaqaalaha dalka gaar ahaan dhinacyada GTP iyo kan SPMka ee uu dalka iyo deegaankuba hiigsanayaan oo wareegiisii labaad hada lagalayo taasi oo sal u ah sidii wadanka itoobiya uga mid noqon lahaa wadamada uu dhaqaalahoodu dhex dhexaadka yahay loona baahan yahay in qorshe kasta si cilmiyaysan oo xiliyaysan loo meel mariyo.
Waxaana ay masuuliyiinka Hormuudka kuliyaduhu ku soo bandhigayeen madashaasi warbixinada waxqabadka 6 bilood ee ugu danbeeyay qaabkii ay u hirgaliyeen qorshihii yaalaywaxa uga qabsoomay,waxaan qabsoomin iyo sababaha kuwaasoo ay kuliyaduhu isku waydaarsadeen khibradahoodii shaqo la iskulana qaatay qorshayaal lagu sii dardargalinayo tayaynta waxbarashada iyo culuunka lagu qaato kuliyadaha DDSI.